ဘာကြောင့် ဆင်းရဲနေကြလဲ?… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဘာကြောင့် ဆင်းရဲနေကြလဲ?…
Posted by Ko out of... on Apr 4, 2012 in Creative Writing | 11 comments
အောင်မြင်ချမ်းသာ ကြီးပွားကြောင်းတရား လေးပါးမှာ…
၁။ ဥဋ္ဌာန သပ္မဒါ -မိမိ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းတွင် ကျွမ်းကျင်မှု ရှိရပါမည်။အလုပ်ကို စိတ်ပါလက်ပါ လုပ်ကိုင်ရမည်။
၂။ သမဇီဝိတ သမ္မဒါ -မိမိဝင်ငွေနှင့် လိုက်လျှောညီစွာ
ချင့်ချိန်နှိုင်းဆပြီး အတိုင်းအတာ ပမာဏအမှန်ကို ချိန်ဆတတ်ရမည်။ စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ သုံးစွဲတတ်ရမည်။
၃။ အာရိက္ခာ သပ္မဒါ – ရရှိသည့် ပစ္စည်းဥစ္စာကို ကောင်းမွန်စွာ
၄။ ကလျှာဏမိတ္တ သပ္မဒါ – မိမိအပေါ်သစ္စာရှိပြီး အကျင့်သိက္ခာ၊ဥာဏ်ပညာ၊ ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့် ပြည့်စုံတဲ့
မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိရမည်။ မကောင်းမှုကိုရှောင် ကောင်းမှုကို သက်ဝင်စေသည့် မိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ ပေါင်းသင်းရမည်။
ပြောချင်တာ ဒီကြီးပွါးကြောင်းတရား လေးပါးမှာ..
ဗေဒင် ကိန်းဂဏန်းအရ စီးပွါးဖြစ်တယ်လို့လည်း ဘုရားမဟောခဲ့ပါဘူး?
ဲဂြိုလ်နက္ခတ်နဲ့ နတ်ကတော်တွေကြောင့် ကြီးပွါးဖြစ်တယ်လို့လည်း မဟောခဲ့ပါဘူး?
ယတြာတွေချေလို့၊ ရက်ရာဇာပြဿဒါး အရွေးမှန်လို့
မွေးဖွါးတဲ့ နေ့ရက်အချိန်ဆိုတဲ့ (ကံဇာတာ) ကောင်းလို့
အရင်ဘ၀က ဒါနအားကောင်းခဲ့လို့ ဓါနရှင်ဖြစ်တာလည်း မဟောခဲပါဘူး?
ဘုရားဟာ…”အတ္တဟိ အတ္တာနော နာထော”
မိမိကိုယ်မိမိ အားကိုယ်းတတ်ဖို့ မိမိသာလျှင်
ကိုယ်းကွယ်ရာ၊ မှီခိုရာ၊ လှဲလှောင်းရာ…
မိမိကိုယ် မိမိစီမန်ခန့် ခွဲတတ်ဖို့၊ မိမိကိုယ် မိမိအရှင်သခင်ဖြစ်ဖို့
တွေဘဲဘုရားက သင်ပေးခဲ့တယ်…ဒီထဲမှာ ငါ့ကို ပန်းရေချမ်းတွေနဲ့ ရှိခိုးဆုတောင်းပြီးရင် စီးပွါးကြီးပွါး
ဖြစ်မယ်လို့ မဟောခဲ့တာ အထင်အရှားပါ…
အသက်ထင်ရှားရှိစဉ်..”၀ဂ္ဂလိကို”…ငါ့ရဲ့ အပုပ်ကောင်ကြီးကို ရှိခိုးနေလို့ ဘာထူးမလဲ? တရားကိုမမြင်ရင်ငါ့ကို မမြင်ဘူးလို့ ဟောခဲ့တာဘဲ မဟုတ်လား?…
ဘုရားပြောတဲ့ စကားကိုသဘောပေါက်လို့ အဲဒီအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးရင် ဘုရားကိုပူဇော်ရာရောက်ပါတယ်…
ပြောချင်တာ ကိုယ့်ရဲ့ စီးပွါးကြီးပွါးအောင်မြင်တိုးတက်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီအချက်လေးချက်ကို လိုက်နာဖို့ပါဘဲ…
ကျန်တာတွေဟာ အပိုအလုပ်တွေပါ…အဲဒီအချိန်ပိုတွေ၊ အပိုအလုပ်တွေကို နုတ်လိုက်ပြီးကျန်တဲ့ နေရာမှာ အကျိုးရှိရှိ အသုံးချလိုက်မယ်ဆိုရင် ဆင်းရဲတွင်းက လွတ်မြောက်ဖို့
လူတွေက ပစ္စယနုဂဟ ပစ္စည်းလေးပါးကို တာဝန်ယူရင်..
ရဟန်းသာမဏတွေက ဓမ္မနုဂဟ ဆိုတဲ့ လူတွေ ကြီးပွါးစီးပွါးဖြစ်ဖို့၊ ချမ်းသာဖို့၊လူတွေငြိမ်းချမ်းဖို့ဆိုတဲ့ အသိတရားကို လမ်းညွှန်မှု ပြန်ပေးရပါတယ်…
ဒါရှင်းရှင်းပြောရရင် အရောင်းအ၀ယ်၊ အလှဲအလှယ်လုပ်တာဘဲ`?..
ဒါဖြင့်ရင် ကနေ့ကျွန်တော်တို့ ပင်ပင်ပန်ပန်းနဲ့ ရှာဖွေထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကို ပေးကမ်းလှူဒါန်းတဲ့ နေရာမှာ
ကျွန်တော်တို့ အတွက်ဘာ အသိတရားတွေ ပြန်ရလဲ?… ဘယ်လောက်အထိ ကျွန်တော်တို့ကို အထောက် အကူပြုလဲ? စစ်ဆေးဖို့လိုတယ်?..
လူတွေဟာ စီးပွါးရေး…ကျန်းမာရေး စသည့် စသည့်အရေးတွေမှာကျတော့ ဟုတ်မဟုတ်၊ အလိမ်များခံရလေမလား?. ဆိုပြီး စစ်ဆေးလိုက်ကျတာမပြောနဲ့..
ဘာသာရေးမှာကျတော့..မျက်စိမိတ်ပြီး အကန်းယုံနေကြတာဘဲ? ဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ဖို့ မေ့နေကြတာများတယ်…
တကယ်တော့ ဘ၀လမ်းညွှန်အဖြစ် ဘာသာရေးကို ကိုယ်းကွယ်ကြတာဘဲမဟုတ်လား? ဒီနေရာမှာ သူ့ကို ပိုပြီးစစ်ဆေးသင့်တယ်လို့ အကြံပြုလိုပါတယ်…
ဘာသာရေးကို စီးပွါးရေးလုပ်သလိုသာ စစ်ဆေးကြမယ်ဆိုရင် လူတွေဒီလောက် ဆင်းရဲကြမှာမဟုတ်ဘူး?…
စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်တာ သံသယ၀ီစိကိစ္ဆာ ကိလေသာမဟုတ်ပါဘူး…
မှတ်သားဖူးခဲ့တဲ့ လင်္ကာလေးနဲ့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်..ရေးစပ်သူရဲ့ နာမည်ကို မမှတ်မိတာ ခွင့်လွတ်နားလည်ပေးပါ..
တချို့ကျတော့ ..ငရဲနဲ့ခြောက်ဘုံနဲ့မြှောက်ပဲလုပ်ကြတယ်..။ ဒါကို ပစ်ယုံသူတွေလည်းရှိတယ်.်.။ တိတိကျကျပြောရရင်.. ငရဲနဲ့ခြောက်ဘုံနဲ့မြှောက်တာပဲ ဟော၊ ပြောနေတဲ့ သူဟာ.. ငရဲပြည်နဲ့..နတ်ပြည်လက်ညိုးထိုး.. သုံးစားနေတဲ့.. ပွဲစားပဲ..။
ပွဲစားတောင်မှ.. ပွဲညွှန့်ပဲစားတဲ့.. လူလိမ်ပွဲစား… :?
ကျွန်တော့ တစ်ယောက် ထဲ အမြင် (ကျွန်တော့ သီးသန့်အမြင်) အရတော့ ဆင်းရဲ တယ်ဆိုတာက … မချမ်းသာ လို့ပါ။ ချမ်းသာ အောင် လုပ်ဆောင်မှု မရှိ .. တနည်း လုပ်ဆောင် နိုင်စွမ်း မရှိ လို့ … မြင်ပါကြောင်း …
စိတ်,ကိုယ် ချမ်းသာခြင်း ကို ဆိုလိုတာပါ နော့
မင်္ဂလာပါ M လုလင်…
ချမ်းသာ အောင် လုပ်ဆောင်မှု မရှိ .. တနည်း လုပ်ဆောင် နိုင်စွမ်း မရှိ လို့ … မြင်ပါကြောင်း …ဆိုတဲ M လုလင်ပြောတာ တစိတ်တပိုင်းတော့ လက်ခံလို့ရပါတယ်..
ကနေ့လူငယ်တွေမှာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း မရှိကြတာ မဟုတ်ပါဘူး..
လူတိုင်းမှာ သူ့နေရာနဲ့သူ အစွမ်းစကိုယ်စီ ရှိကြပါတယ်…ဒါပေမဲ့ ဒီအသိတရားကို.. သိခွင့်မရအောင်
လှောင်ပိတ်ပြီး..လောင်းရိပ်မိနေတဲ့ အပင်ငယ်တွေကြောင့် မရှင်သန်မကြီးထွား တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်?..
ရှေ့ဆောင်လမ်းညွှန်မှု သဘောတရား အမှားတွေကြောင့် လူတွေမချမ်းသာတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်?
နောက်တခု …စိတ်၊ကိုယ်ချမ်းသာခြင်းဆိုတာလည်း တစိတ်တပိုင်း မှန်ပါတယ်.. ကိုယ်ဘဲ စိတ်ချမ်းသာပြီး သူများ ဘာဖြစ်နေဖြစ်နေ ကိုယ်မဖြစ်ရင်ပြီးတာဘဲ ဆိုတဲ့ လူတန်းစားတွေလည်းရှိနိုင်တယ်…
အဲဒီလိုလူတန်းစားတွေက လူကို ခြောက်ပြီးအုပ်ချုပ်တယ်…နောက်ချော့ပြီးမြောက်ပြီးတာ့ သိမ်းသွင်းတယ်..
ချော့ပြီးမြောက်ပြီး အုပ်ချုပ်သိမ်းသွင်းတာ ကျတော့ မြင်ဖို့ နည်းနည်း ခဲယဉ်းလိမ့်မယ်…ဆရာတော်တပါးထံက ဥပမာ..လေးတခုပါ…လူတိုင်းမှာ အားနည်းချက် ကိုယ်စီရှိကြတယ်တဲ့…ကိုယ်မရင်းနှီးဖူးတဲ့ ကြောင်၊ခွေးတွေမှာ ဆိုရင်တောင်ဘဲ မြှေးစေ့နဲ့ ဗိုက်သာ ပွတ်ပေးလိုက်ကြည့်ပါလား…
ခဏလေးနဲ့ရင်းနှီးသွားတယ်…လူတွေလည်း ကာမတဏှာ၊ ဘ၀တဏှာ၊ ၀ိဘ၀တဏှာ ကမကင်ေးသေးတော့…မင်းဒါကိုလှူဒါန်းပေးကမ်းရင် နောင်ဘ၀ကျ အကျိုးတွေဘယ်လိုခံစားရမယ် ..ငါကိုယုံကြည်ရင် ကောင်းကင်ဘုံ ရောက်မယ်ဆိုတော့… လူတွေက မစဉ်းစားတော့ဘူးဗျာ?…
မမြင်ရတဲ့ အရာကို လမ်းညွှန်မှု သဘောတရားပေးတော့.. နောက်လိုက်တွေကို ဆင်းရဲစေတာပေါ့..
မြန်မာနိုင်ငံကို ဖေဖေါ်ဝါရီလမှာ ၁၆ရက်ကြာအလည်သွားခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေသြစတြီးယားလူမျိုးနဲ့ မနေ့ကဆုံတော့ သူ့ခရီးသွားအတွေ့အကြုံလေးတွေကို ပြန်ပြောပြတယ်။ ပထမတော့ သူလည်ပတ်ခဲ့တဲ့နေရာအကြောင်းတွေ အစားအသောက်အကြောင်းတွေ ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုအကြောင်းတွေ သူလုပ်ခဲ့တဲ့activitiesအကြောင်းတွေ…စတာတွေပေါ့။ ခရီးသွားကုမ်ပဏီ(ဘယ်နိုင်ငံကခရီးသွားအေဂျင်စီလည်း မမှတ်မိတော့ပါ)က ခရီးစဉ်အစအဆုံးကို အကွက်ကျကျသေသေချာချာစီစဉ်ပေးတာရယ် အကောင်းဆုံးဟိုတယ်တွေမှာတည်းခဲ့လို့ရယ်…အကောင်းဆုံးတိုးဂိုဒ်(ဂျာမန်စကားပြော)ရဲ့ကူညီမှုတွေကြောင့်ရယ်…မြန်မာပြည်ပထမဆုံးခရီးက စိတ်အပန်းပြေခဲ့ပုံပါပဲ…သူ့အပြောအရပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အဓိကသူ့စိတ်ထဲရှိနေတဲ့အရာကိုပြောချင်တာက နောက်မှလာတာ…။ သူက မြန်မာပြည်ဟာ သိပ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် ဘာဘာညာညာ စကားကိုလှလှပပသုံးသွားပေမဲ့ သူက…အမှန်က… ထိုင်းနဲ့နှိုင်းနှိုင်ြး့ပီး ဝေဖန်သွားတာ…မြန်မာပြည်ရဲ့ရဟန်းဘုန်းကြီးတွေပါပဲ…။ ပုဂံသွားတော့လည်း နိုင်ငံခြားသားမြင်တာနဲ့ လာတောင်းကြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေ မယ်သီလရှင်တွေ…ကျိုက်ထီးရိုးသွားတော့လည်း ပိုက်ဆံတောင်းတဲ့ ရသေ့ရဟန်းတွေ…သုံးတဲ့စကားကတော့လှလှလေး သူလုံးဝနားမလည်နိုင်ဘူးပေါ့…။ ဘုန်းကြီးတွေ မနက်ဆွမ်းခံထွက်ကြွတာကိုမြင်တော့ သူအံ့သြသေးဆိုပဲ…ဘုန်းကြီးအပါး၁၀၀လောက် တန်းစီပြီးဆွမ်းခံထွက်တာ သူမမြင်ဘူးဘူးလေ။ အိမ်ဦးနဲ့ကြမ်းပြင်လို့ဖြစ်နေတဲ့ထိုင်းကိုရောက်တုန်း မြင်ဘူးခဲ့တာက…ဆွမ်းခံထွက်တဲ့ဘုန်းကြီးအရေအတွက်က မြန်မာလိုမများဘူးလေ…ရှိလှ ၄ ၅ ၁၀ယောက်ဆိုတော့…။ မြန်မာပြည်အလည်ရောက်တုန်း မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ဘုန်းကြီးရဟန်းတွေက ပိုက်ဆံတောင်း ကွမ်းဝါး ဆေးလိပ်သောက် သင်္ကန်းပိုသီပတ်သီ အင်တာနက်ဆိုင်ထိုင်…စတာစတာတွေဆိုတော့ Amazing…interestingဆိုပြီး စကားလုံးလှလှလေးတွေသုံးသွားပေမဲ့ သူ့စိတ်ထဲဘာတွေရှိနေတာခန်းမှန်းမိနေတော့ မြန်မာဗုဒ်ဓဘာသာတစ်ယောက်အနေနဲ့ စိတ်ထဲမကောင်းဘူး။ သူက ကဲ့ရဲ့တာမဟုတ်ပဲ သူ့အမြင်ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောဆိုဝေဖန်တာဆိုတော့…သူ့အမြင်ကိုလေးစားရမယ်လေ။ ဆက်ရေးချင်သေးပေမဲ့…တော်သေးပြီ။
အချိန်ရရင် ဆက်ရေးပေးစေလိုပါတယ်… တစ်ယောက်သိလဲ မနည်းဘူး.. အရေအတွက်ထက် အရည်အချင်းပေါ့… တကယ်တော့ လူတွေဟာ အရေအတွက် ထက်အရေအချင်း ကိုပိုကြောက်ကြပါတယ်?..
ကမ္ဘာကြီးကို လူတွေအများကြီးအုပ်ချုပ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး?…လူနည်းနည်းလေးက ကြီးစိုးပြီး အုပ်ချုပ်နေတာ…လက်တွေ့လောကမှာ အသုံးချလို့ မရတဲ့ သဘောတရားတွေကတော့… တနေ့ကျရှေးဟောင်းပြတိုက်မှာ..ရောက်မှာဘဲ…
မဟုတ်၊မမှန်တာ လုပ်တာကိုပေါ်လွင်အောင် ချပြပေးနိုင်ရင်…သတင်းပေးနိုင်ရင်… လူတွေသဘောပေါက်လာကြပြီး… ဆင်းရဲတွင်း ကနေတဖြည်းဖြည်း ရုန်းထွက်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်တယ်..
ဆင်းရဲနေတဲ့ အကြောင်းအရင်တွေ အများကြီးပါ
လက်လျှော့နေတဲ့ လူတွေ့ကြောင့်ကတော့ အများကြီးပေါ့
ပီးတော့ အလုပ် လုပ်သလောက် အကျုိးအမြတ်မရလို့
မင်္ဂလာပါame နှင့် ချာလီ ရေ…
၁။ မဖြစ်နိုင်တာကို မလုပ်တော့ပါဘူးဆိုတာ မှန်တယ်လေ..မဖြစ်နိုင်တာလုပ်ရင် လူပင်ပန်းတာပေါ့..
လက်လျှော့နေတဲ့လူဆိုတာလည်း.. အကျိုးအမြတ်မရရင် လျှော့သင့်ရင်လျှော့ရမှာပေါ့..
ရူပဗေဒ သဘောတရားမှာတော့… ကျောက်တုံးကို အင်အားကြီးကြီးနဲ့ မည်မျပင်တွန်းပေမဲ့ နေရာက မရွှေ့လျှင် အလုပ်လုပ်တယ်လို့ မခေါ်ဘူးတဲ့.. အလုပ်မဖြစ်ရင် လက်လျှော့ပြီး နည်းလမ်းအသစ် ရှာရမှာပေါ့နော်..
၂။ ဆင်းရဲတဲ့ လူတိုင်း အလုပ်မလုပ်တာမှ မဟုတ်တာ .. သူတို့ခေါင်းပုံဖြတ်ရလို့လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်?..
လုပ်ပိုင်ခွင့် မရလို့လည်း ဖြစ်နိုင်သေးတယ်?..အလုပ်သမား အခွင့်အရေး ချိုးဖေါ်က်ခံရလို့လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်..
လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုဘဲ လုပ်ပ်ိုင်ခွင့် အများကြီးပေးထားတော့.. လူတန်းစား ကွာဟမှုအများကြီး ဖြစ်နိုင်တာလည်း စဉ်းစားဖို့လိုတယ်?..
သူများက ပင်ပင်ပန်းပန်းရှာထားတာကို မမြင်ရတဲ့ အရာနဲ့ ခြိမ်းခြောက် မြောက်ပင့်ပြီး တောင်းစားနေတဲ့ လူတန်းစားတွေကြောင့် လည်းဖြစ်နိုင်တယ်?.
လုပ်သလောက် အကျိုးအမြတ်မရတာ…ပိုစဉ်စားဖို့လိုတာပေါ့?.အလုပ်လုပ်တယ် ဆိုတာ အမျိုးမျိုးရှိတယ်…
အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာ ကာယ၊ ၀စီ၊ မနော အဲဒီကံသုံးပါး မပါဘဲ မရပါဘူး… အလှူတန်းလုပ်တာလည်း အလုပ်လုပ်တယ် လို့ဆိုရမယ်…အထူးသဖြင့် အလှူအတန်း လုပ်တဲ့ အလုပ်ကို ပိုစစ်ဆေးရမယ်…ဘာဖြစ်လည်း ဆိုတော့ တသက်လုံး ကိုယ်ပင်ပင်ပန်းပန်းရှာထားတာကို တရက်တည်းနဲ့ အသုံးချလို့ဘဲ…လှူလိုက်လို့ ဘာ အကျိုးအမြတ်ရလဲ? …
နောက်ဘ၀ သူဋ္ဌေး ဖြစ်ဖို့လား? ဒီဘ၀ကိုဘဲ သူဋ္ဌေးဖြစ်အောင် အရင်လုပ်ကြည့်ပါဦး?…စဉ်းစာဖို့လိုတယ်…